Ku-xigeenka Ra'isul-Wasaaraha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga (AKP) "Ka hor tagay iyaga oo geeriyoodaya" ayaa yiri
CHP'li Ozgur Ozel, ku xigeenka AKP Ahmet Arslan wuxuu ku dhintey shilalka tareenka in kabadan kun muwaadiniin ah 500'un 'Jaantuska ayaa u muuqda inuu aad u badan yahay. Xaqiiqdii, tareenka ayaa tagaya, waxaa jira heer goyn, oo ku dhinta cagaf cagafyada oo dhimanaya ' [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, oo ah wasiirkii hore ee gaadiidka, arrimaha bada iyo isgaadhsiinta ayaa la wareegay Ahmet Arslan. Ka dib xafladda caleenta, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan ayaa soo saaray farriin. [More ...]
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, ayaa kala wareegay wasiirkii hore ee gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta, Ahmet Arslan. Turhan, ayaa khudbaddii uu ka jeediyay xafladda lagu qabtay xarunta Wasaaradda, wuxuu sheegay in dadka dalka u fududeeya nolol maalmeedka [More ...]
Sharaxaadda Wasaaradda Gaadiidka ee Shilalka Tareenka
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydan gelen tren kazası sonrası yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet [More ...]
Wasiir Arslan: X Waxaan u adeegsan jirnay 15 si loogu isticmaalo bilyan doolar 474 mashruucyada gaadiidka
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa yiri: “Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul waxaa marka hore shaqaaleysiin doona 100 kun oo qof, dabaqa 20 ee Tüpraş. Markaan u nimid 2023e 225 kun oo qof ayaa shaqeyn doona marka wejiyadaha kale ay ciyaaraan. [More ...]
Wasiirka arimaha gudaha: IP Waxaan ku sii gudbineynaa Ilgar Bakan
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa sheegay inay horumar la taaban karo ka sameeyeen Isgooyska Ilgar. [More ...]
Wasiirka Arimaha Gudaha ayaa booqday saldhigga Ankara Logistics
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa yiri: Qaar kamid ah waxay dhahaan in mashruucyada gaadiidku ay yihiin kuwo aan loo baahneyn oo dhaqaale la taaban karo. Waxaa laga yaabaa inaysan ka warqabin waxa dhaqaalaha la taaban karo u keenayo dalka, ayuu yiri. gaadiidka, [More ...]
Madaarka Cusub ee Istanbul 225 oo siiya Shaqo Malaayiin ah
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 29 Ekim’de açılacak 3. Havalimanı’nda 2025 yılı itibarıyla 225 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan TRT Haber’de [More ...]
Shirkadaha waaweyn ee xamuulka qaada waxay ku yaalaan Istanbul Airport
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa sheegay in shirkadaha waaweyn ee xamuulka qaada ay bilaabeen inay codsadaan si ay uga qeybgalaan gegada diyaaradaha ee Istanbul, oo noqon doonta tan ugu weyn adduunka. [More ...]
13 ayaa la furay Juun 2018 iyadoo xaflad ay goob joog ka ahaayeen R / wasaare kuxigeenka Recep Akdağ iyo Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan. Farxadda ugu weyni waa inaan dadkeenna u adeegno. [More ...]
Wasiirka Arimaha Bulshada ee Ramadaanka
Muwaadiniinta qaaliga ah, Asxaabta qaaliga ah, Ka tagida bisha barakeysan ee Ramadaan-i Shariif gadaal naxariis, naxariis iyo barakeysan; qaran ahaan, waxaan gaarnay isku soo dhaweyn aad u balaaran. Munaasabadan, waxaan kuu rajeynayaa sida ugu wanaagsan ee Ramadaan [More ...]
TCDD tarafından Erzurum da yapımı tamamlanan Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle hizmete [More ...]
Wasiirka Arimaha Dibada oo Mashruuc ka Baxay Karsaska
Wasiirka Gaadiidka Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, Xarunta Kars Logistics Center iyo dhismaha Wadada Karakurt-Erzurum 'Nu ayaa laga baaray hawada. Wasiir Arslan, wuxuu u jeedinayaa Wadada Tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars, mid ka mid ah khadadka ugu muhiimsan ee isku xira Aasiya iyo Yurub [More ...]
Buundooyinka iyo Waddooyinka ku yaala Ciidda Al-Fitr Free!
Inta lagu jiro fasaxa bisha Ramadaan, 15 Luul Martyrs Bridge, Fatih Sultan Mehmet Bridge iyo jidadka waa lacag la’aan inta u dhaxaysa 15-17 June. Gaadiidka, Badda [More ...]